Maxkamadeynta udhaxeysa Apple iyo Epic Games ayaa dib udhacday ilaa May 3. | Waxaan ka socdaa mac
Maxkamadeynta udhaxeysa Apple iyo Epic Games ayaa dib udhacday ilaa May 3.
Waqtigan xaadirka ah ee ciyaarta waa inaan horeyba u ogaanaa qof walba dhibaatooyinka u dhexeeya Apple iyo Epic Games. Waxaan si dhakhso leh u oran karnaa kan labaad ayaa jebiyay shuruudaha App Store sababtoo ah ciyaarta Fortnite. Apple waxay aaminsan tahay inaysan sameyn karin waxyaabo ka reeban iyo maadaama aysan wax heshiis ah gaarin, maxkamadeyntii markii hore bilaaban laheyd bisha Maarso ayaa dib u dhacday ilaa May. Waxay noqon doontaa maalinta 3 iyadoo loo eegayo cidda mas'uulka ka noqon doonta go'aan qaadashada.
Garsoore Yvonne González ayaa la kulmay qareennada labada dhinac, Epic Games iyo Fortnite, si loo go'aamiyo bilowga dacwada u dhaxeysa labada shirkadood. Way cadahay inay noqon doonto 3-da Maajo. Intaas waxaa sii dheer, garsooraha wuxuu qorsheynayaa inuu si isku mid ah u qabto shakhsiyaadka wuxuuna u baahan doonaa dhamaan markhaatiyaasha inay u safraan Waqooyiga California si ay uga jawaabaan su'aalaha maxkamada iyo xaakimka hortooda. Waxay rumeysan tahay in kiiska uu yahay mid muhiim ah oo ku filan in maxkamadda ay si shaqsi ah u dhageysato, iyo in markhaatiyaasha kiiska ay u badan tahay inay been sheegaan marka lagu dhaariyo qolka maxkamadda.
Arrinta aafada, markhaatiyaal badan ayaa laga yaabaa inaysan safrin oo ay tahay inay markhaatiyaashooda ku bixiyaan shir fiidiyoow ah. Laakiin xaakimka ayaa hore uga digay taas wuxuu baari doonaa mid kasta oo ka mid ah kuwa sheeganaya inaysan tagi karin shaqsi ahaan oo la horkeeno Maxkamadda. Intaas waxaa sii dheer, garsooraha ayaa ka digay in labada shirkadoodba ay leeyihiin habab lagama maarmaan u ah inay karantiil ku noqdaan kaaliyeyaasha muddo labo toddobaad ah, marka muuqaalkoodu dhammaado. Iyadu iyada ayaa mas'uul ka noqon doonta u hoggaansanaanta tallaabooyinka amniga ee gudaha Maxkamadda.
Epic Games‌ waxay ku doodi doontaa in Apple boqolkiiba 30 ay bixiso codsiyada ay tahay "dulinimo." Sababtoo ah taasi waa sababta horumariyeyaasha looga baahan yahay inay adeegsadaan wax ku iibsiga barnaamijka. Apple waxay hoos u dhigtay khidmadda laga bilaabo 30 boqolkiiba illaa 15 boqolkiiba soo-saareyaasha sameeya wax ka yar $ 1 milyan, laakiin taasi ma khusayso "Ciyaaraha Epic." Apple waxay isdifaaci doontaa iyadoo ilaalinaysa in sharciyada loo wada siman yahay qofna looma reebi karo marka laga reebo muujinta taas hanti ma leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Maxkamadeynta udhaxeysa Apple iyo Epic Games ayaa dib udhacday ilaa May 3.
Waxqabadka ECG ee Apple Watch waxaa laga ansixiyay Australia
Ridley Scott ee Apple TV + Filimka Napoleon ee Star Joaquin Phoenix iyo Jodie Comer